के हो पोस्ट लकडाउन एन्जाइटी ? पढ्नुहोस् समाधानका उपायहरु – Padhnekura
काठमाडौं – कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले यस वर्ष पनि लकडाउन गर्‍यो। गत वर्ष जस्तो यो वर्ष लकडाउन नभनेर निषेधाज्ञा नाम दिइएको थियो। लकडाउनपछि सबैजसो मानिसहरु घरभित्रै थुनिए। लकडाउनको समयमा अधिकांशलाई एन्जाइटी, डिप्रेसन जस्ता मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरु देखिए।
करिब तीन महिनाको निषेधाज्ञापछि हाल नियमित काम तथा क्रियाकलापमा धेरै मानिसहरु फर्कँदै छन्। लकडाउन तथा निषेधाज्ञा भएको समयमा मात्र नभई लकडाउनपछि पनि विभिन्न मानसिक समस्या देखिन सक्ने मनोचिकित्सक बताउँछन्।
जसमध्ये एक हो, ‘पोस्ट लकडाउन एन्जाइटी’
मनोचिकित्सक डा रितेश थापा लकडाउन खुलेपछि मानिसहरुमा पोस्ट लकडाउन एन्जाइटीको समस्या देखिन सक्ने बताउँछन्। एन्जाइटी एक किसिमको आत्तिने डराउने रोग हो। कोरोना संक्रमितमा हाल यो समस्या सबैभन्दा धेरै देखिने गरेको छ।
लकडाउनपछि पुनः सामान्य दैनिकीमा फर्कने क्रममा हुने एक किसिमको एन्जाइटी नै पोस्ट लकडाउन एन्जाइटी हो।
उनी भन्छन्, ‘सामान्य दैनिकीबाट हामी लकडाउनमा गयौं। अहिले लकडाउनबाट फेरि सामान्य जीवनमा फर्कदै छौं। तर दुई तीन महिनाको लकडाउनमा मानिस घरभित्रै बस्दा उसको बानी तथा दैनिकीमा परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। त्यो क्रममा मानिसहरुमा एक किसिमको डर चिन्ता देखिन्छ।’
एन्जाइटीमा श्वास फेर्न गाह्रो हुने, चिटचिट पसिना आउने, कसैलाई घाँटीमा केही अड्किएको जस्तो लाग्ने, खसखस हुने, हातखुट्टा काम्ने, झर्को लाग्ने, छटपटाहट भइरहने, हातहरु काम्ने, मर्छु जस्तो बेहोसे हुन्छु जस्तो लाग्ने, नकारात्मक सोचहरु आउने लक्षण देखिन्छन्।
उनले भने, ‘एउटा आनन्दको अवस्थामा बसिरहेकाहरु काममा फर्कदा थकाई जस्तो महसुस हुने पनि हुन्छ। लकडाउनपछि सामान्य अवस्थामा फर्कन गाह्रो किसिमको महसुस पनि गर्ने गर्छन्।’
कुनै व्यक्तिहरु त ओभर कन्सियस अर्थात् अधिक सचेत हुने समस्या पनि देखिएको छ। जसमा आवश्यकभन्दा बढी नुहाउने, हात धुने, लकडाउन खुलाउनै नहुने भन्दै रिसाउने जस्ता समस्या देखिएको उनले बताए।
सामान्य दैनिकीपछि लकडाउनमा समायोजन गर्न गाह्रो भएजस्तै लकडाउनपछि सामान्य दैनिकीमा फर्कन कतिपयलाई गाह्रो भइरहेको छ।
‘यस किसिमको व्यवहारहरु मानिसले देखाइरहेको छ भने पोस्ट लकडाउन एन्जाइटी हुन सक्छ’ उनले भने, ‘किनभने मैले किन यस्तो व्यवहार देखाइरहेको छु भन्ने कुरा उनीहरुलाई थाहा हुँदैन।’
यो सँगै पोस्ट लकडाउन एन्जाइटीमा शारीरिक समस्याहरु टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, बजारमा जान डर लाग्ने, कार्यालयमा जान डर लाग्ने, भीडमा जान डर लाग्ने जस्ता लक्षणहरु पनि देखिन सक्छ।
पोस्ट लकडाउन एन्जाइटीमा विभिन्न लक्षणहरु देखिन सक्छन्। जसलाई बुँदागत रुपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
१. भविष्यप्रति चिन्ता
पोस्ट लकडाउन एन्जाइटीमा व्यक्ति आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित हुन्छन्। कोरोना महामारी र लकडाउनमा भएको उतारचढावका कारण मानिसहरु आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित हुन थालेका छन्। अहिलेको अवस्थामा प्रायजसो मानिसहरु आफ्नो भविष्यप्रति सुनिश्चित हुन सकेका छैनन्। फेरी डाउन हुन्छ, लकडाउन भए के गर्ने ? हामी कसरी सुरक्षित बस्ने ? भन्ने किसिमको डर यस एन्जाइटीमा पैदा हुन सक्छ।
२. निद्रामा समस्या
लकडाउन भएपछि सबै जना मानिसहरु घरभित्रै थुनिए। दैनिक गर्दै आएका काम र क्रियाकलापहरुमा एकाएक परिवर्तन भए। घरभित्रै थुनिएपछि अधिकांशको दैनिकीमा परिवर्तन भयो। ढिलो सुत्ने, ढिलो उठ्ने लगायत व्यवहारका कारण मानिसहरुको निद्रामा समेत समस्या हुने गरेका छन्। यो एन्जाइटी हुने व्यक्तिहरुमा पनि राति निद्रा नलाग्ने, निद्रामा समस्या हुने जस्ता लक्षण देखिन सक्छ।
३. थकान र चिढचिढापन हुनु
यदी कुनै व्यक्ति एकदम थकित अनि चिढचिढापन महसुस गरिरहेको छ भने पोस्ट लडकाउन एन्जाइटीको समस्या हुन सक्छ। दैनिकीमा आएको परिवर्तनका कारण मानिसहरु स–सानो कुरामा रिसाउने, झर्किने, चिढाउने किसिमको पनि हुने गर्छन्।
४. श्वास फेर्न गाह्रो हुने
यदी कुनै व्यक्ति चिन्तित र तनावपूर्ण अवस्थामा छ भने उसले श्वासप्रश्वासमा केही समस्या भएको महसुस गर्छन्। यो एन्जाइटीको समस्या हुनेहरुमा पनि श्वास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता लक्षण देखिन्छन्। किनभने यो अवस्था भएका व्यक्तिहरु सामान्य अवस्थामा हुँदैनन्। उनीहरु स–साना कुरामा झर्को मान्ने, तनावपूर्ण अवस्थामा रहने हुन्छन्।
५. धेरै नकारात्मक सोच आउने
लकडाउन खुलिसकेपछि पनि कतिपय मानिसहरु भीडभाड तथा बजारमा जान डर मान्ने गर्छन्। उनीहरुमा अझै पनि मलाई कोरोना सरिहाल्छ भन्ने जस्ता डरहरु मनमा गढिएर बसेको हुन्छ। बजार तथा कार्यालयमा जान डर लाग्ने, भीडमा जान डर लाग्ने जस्ता लक्षणहरु देखिन सक्छन्। मलाई अरुले कोरोना सारिदिन्छ, कोरोना लाग्ने बित्तिकै मरिहाल्छु भन्ने जस्ता नकारात्मक सोचहरु उनीहरुमा आउन सक्छ।
६. अधिक सतर्क व्यवहार
कोरोना लगायत विभिन्न रोगबाट बच्न सतर्क रहनु राम्रो हो। तर अधिक रुपमा सर्तक रहनु सामान्य होइन। डा रितेश थापाका अनुसार केही व्यक्तिहरुमा ओभर कन्सियस अर्थात् अधिक सचेत हुने समस्या पनि देखिएको छ। जसमा आवश्यकभन्दा बढी नुहाउने, हात धुने, लकडाउन खुलाउनै नहुने भन्दै रिसाउने जस्ता समस्या पनि यसको लक्षण अन्तर्गत पर्दछन्।
७. शारीरिक लक्षण
पोस्ट लकडाउन एन्जाइटीमा व्यक्तिलाई मानसिक लक्षण मात्र नभई विभिन्न शारीरिक लक्षण पनि देखिन सक्छन्। ती शारीरिक लक्षणलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, पसिना आउने, वान्ता हुने लक्षणहरु यस अन्तर्गत पर्दछन्।
यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने ?
डा रितेश थापाका अनुसार लकडाउन हालै मात्र खुलेकाले पोस्ट एन्जाइटीको समस्या फाट्टफुट्ट रुपमा मात्र देखिन थालेको छ। कुनै पनि कुरा एकै पटक गर्नुभन्दा विस्तारै गर्दै गए मानसिक रुपमा हुने दबाब कम हुने उनले बताए। आफुलाई भएको समस्या बारे खुलेर कुरा गर्न उनको सुझाव छ।
यो समस्या मलाई मात्र भएको हो भनेर लुकाउनु हुँदैन। उनले भने, सबै जना यही क्रमबाट गुज्रनु भएको छ। सबैलाई यस किसिमको समस्या देखिन सक्छ। त्यसैले आफ्ना समस्याबारे खुलेर कुरा गर्नु पर्छ।
यस किसिमको एन्जाइटीबाट बच्न दैनिक कामको तालिका बनाउने, व्यायाम गर्ने, योग तथा ध्यान गर्ने गर्नुपर्छ। तर यी सब गर्दा गर्दै पनि सामान्य जीवनमा फर्किन सकिएन भने मनोचिकित्सकको परामर्श जानुपर्ने डा थापाले बताए।
– दैनिक लक्ष्य निर्धारण गर्ने
आफ्नो दैनिकीलाई व्यवस्थित गर्न लक्ष्य निर्धारण गर्न आवश्यक छ। लक्ष्य निर्धारण गरी दैनिकीको सुरुवात गरे तनाव व्यवस्थापन र एन्जाइटीको समस्याबाट बच्न मद्दत मिल्छ। आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न समस्या भइरहेको छ भने आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ। आफुलाई खुशी मिल्ने कामहरु गर्नुपर्छ। जस्तैः खाना बनाउने, खेतबारीको काम गर्ने, चित्र बनाउने, फिल्म हेर्ने लगायत कामहरु गर्न सकिन्छ।
– आफ्ना समस्या तथा चिन्ता साझा गर्ने
आफुलाई परेको समस्या र चिन्ता बारे खुलेर कुरा गर्नुपर्छ। आफन्त या नजिकको साथीलाई आफ्ना समस्या तथा चिन्ता साट्न सके मन हलुका हुन्छ। यदी कुनै व्यक्ति मानसिक समस्यासँग जुधिरहेको छ भने त्यसलाई मनभित्र लुकाएर राख्नु हुँदैन।
– स्वीकार गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ
समस्या र चुनौतीसँग सबै मानिसहरु जुध्नुपर्छ। तर केही व्यक्तिहरु समस्यासँग जुध्न डराउँछन्। कुनै पनि समस्या र अवस्थालाई उनीहरुले सहजै स्वीकार गर्न सक्दैनन्। आत्तिने, डराउने खालका समस्याहरु धेरैमा हुने गर्छ। तर कुनै पनि समस्यासँग डराएर भन्दा पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न सके एन्जाइटी जस्ता समस्याबाट बच्न सकिन्छ।
– वर्तमानमा बाँच्नुपर्छ
अधिकांश मानिसहरु भविष्यलाई सोचेर वर्तमानमा चिन्तित हुने गर्छन्। भविष्यका बारेमा धेरै चिन्ता लिइरहँदा वर्तमानमा असर गरिरहेको हुन्छ। यो कुराबाट धेरै जना अवगत भएपनि व्यवहारमा लागु गर्न सक्दैनन्। आफ्नो दिनको सुरुवात ध्यानबाट सुरु गरी त्यस दिन र वर्तमानलाई सुन्दर बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ। भविष्यको चिन्ताले वर्तमानलाई समस्यामा धकेल्नु हुँदैन।
– सामाजिक सञ्जालमा धेरै समय नबिताउने
अहिले अधिकांशले आफ्नो समय सामाजिक सञ्जालमै बिताउने गर्छन्। अझ लकडाउनको समयमा त झन् सामाजिक सञ्जाल नै धेरैको साथी समेत बन्यो। सामाजिक सञ्जालमा सत्यदेखि भ्रम र सकारात्मकदेखि नकारात्मक खबरहरु समेत आउने गर्छ। हामीले भ्रम र सत्य, सकारात्मक र नकारात्मक कुरालाई छुट्याउन सकेनौ भने यसले एन्जाइटीदेखि विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा निश्चित समय मात्र बिताउन आवश्यक छ। सबै किसिमको खबर भन्दा पनि आधिकारिक सञ्चार माध्यमले प्रकाशन/प्रशारण गर्ने खबरहरु मात्र छनोट गरी पढ्न आवश्यक छ।
– दैनिक व्यायाम तथा ध्यान गर्ने
व्यायामले शारीरिकदेखि मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक फाइदा गर्छ। आफ्नै दैनिकीको लक्ष्य निर्धारण गर्दा व्यायामलाई कहिले छुटाउनु हुँदैन। कोरोना र लकडाउनको विषयम परिस्थितिमा त झन् व्यायाम अति नै आवश्यक छ।
स्वास्थ्य खवर पत्रिका बाट ल्याईएको पढ़नेकुरा
Tags: post covid
Previous खरिद र अनुदानसहित ८० लाख खोप सुनिश्चित